Isondo kunye neqabane elitsha: nini?
Mhlawumbi bonke abafazi banenkxalabo malunga nombuzo: nini kulungele ukuqala ubudlelwane obusondeleyo kunye neqabane elitsha - ngaba kufanelekile ngomhla wokuqala okanye kufuneka ulinde iinyanga ezimbalwa? Siye safunda imbono yesintu malunga nale mibuzo.
Kukho imibono ephikisanayo emibini. Umntu wokuqala uthi umfazi olala ngokukhawuleza nendoda, ngaphantsi kobudlelwane babo buya kuhlala. Kwaye okwesibini iyaphikisana: ukuba uyayivakalelwa ngokwenene, kutheni ukulibaziseka ngesondo?
Umbuzo wukuthi ulala ngosuku lokuqala, kwaye ngokuqhelekileyo xa ufuna ukuqala ngesondo kunye neqabane elitsha, luba luncedo xa uqonda ukuba unomtsalane. Umgca olungileyo phakathi kobudlelwano obulula kunye nobudlelwane obusondeleyo kulula ukuwela, kodwa oko kuya kwenzeka emva koko - akusoloko kucacile.
Xa abantu beqala ukudibana, bahlala beyazi ukuba babala ntoni. Xa elinye iqabane liqala ukuthi "andiyazi, makhe sibone oko kuza kuza khona", mhlawumbi uyaqhinga okanye ukwesaba ukuphazamiseka kweso sidima esichukumisayo, okulula kakhulu ukutshabalalisa kunye nelizwi elikhawulezileyo, kwaye kungekhona nje oko kulwabelana ngesondo.
Ngokutsho kophando lwezenhlalakahle, okwesithathu kwabasetyhini ubuncinane babekanye ngesondo ngosuku lokuqala, kodwa isiqingatha sabo bayazisola. Nangona kunjalo, ukuba ibhinqa lenqabe ukulala ngesondo lokuqala, ngokokuba umntu uya kuhamba naye ngosuku lwesibini ngu-50x50.
Umbhali wale miqolo wenza uphando oluthile phakathi kwabasetyhini bakhe abaqhelekileyo kwaye bafumanisa xa baqala ukulala ngesondo kunye neento eziqhelekileyo.
Ngoko ke makhe sithethe malunga nokulindela umfazi ukuba ulala nomntu ngomhla wokuqala, emva kweveki 1, iiveki ezimbini, inyanga 1, iinyanga ezimbini, iinyanga ezintathu okanye ngaphezulu.
Umhla wo kuqala
Njengoko bathetha, vula kwi-bat. Okanye ukusuka kwinqanawa ukuya kwibhola. Abantu abenza uthando ngomhla wokuqala, abayithandi kuphela isondo, kodwa banokuzithemba ngokwabo kwaye abayi kudanisa.
Uthando olunjalo kunye nokuzithemba kuphela kunokufakazela izinto ezimbini. Okanye ukuba akusayi kuphinda kubekho ulwalamano kwaye lo kuphela "umlingane-ubusuku obunye", okanye isithwathwa seqhwithi, kodwa, nangona kunjalo, liya kudlula ngokukhawuleza njengoko kuqale.
Kodwa umtshato unokwenzeka. Ikakhulukazi ukuba ibhinqa lingakhulelwe. Ukuba umtshato uyenzeka kunye nakwezinye, isizathu esimangalisa ngokwenene, ngoko asiyi kuhlala ixesha elide.
Eli gama lihloniphekile. Ngeli xesha, unako ukudibana namaxesha angama-2-4, ufunde omnye nomnye, uvavanye umgangatho weemvakalelo.
Nangona kunjalo, okufanayo, amathuba okuba ulwalamano luya kufumana iofisi yokubhalisa, akwanele. Malunga nama-20%.
Ngokwenene, isondo ngeveki kukuqala kwencwadana emfutshane ehlala kwisini esifanayo. Olu luqeqesho oluhle phambi kobudlelwane obunzulu.
Isiqalo esihle sobudlelwane obude kunye obukhulu. I-100% ayikho isiqinisekiso, kodwa ubuncinane ubunikwa i-50%.
Ukuba ibhinqa (kunye nendoda) ayinakucacisekanga ngokwemigangatho yesondo, iiveki ezimbini lixesha elifanelekileyo lokuba ucinge ngokubhekiselele kuyo, mhlawumbi umntu oyifunayo.
Emva kwenyanga, kwi-80% yamatyala, abafazi ngokwabo baqhelana ngesondo.
Bafuna ukubonisa amadoda ukuba balala njani ebhedeni, kwaye ngexesha elifanayo siyabonga ngokuba iqabane lilindele eli thuba ixesha elide.
Enye inyanga yokuzilahla ibonisa ukuqala kobudlelwane obunzulu. Abalingani basebenolwazi kakuhle kwaye baqonda ukubaluleka kobudlelwane.
Emva kwesi tshathelo ngesondo: ufunde ukuba umntu unokuyenza ngaphandle kwesondo ngexesha elide, nokuba unomdla kuye njengomntu.
Okokuthi, malunga neenyanga 1 elinde abafazi abangenalo. Kwaye ukuba emva kobudlelwane ubudlelwane beqabane kunye nokuya kwinqanaba eliphakamileyo, unokwenza u-70% uqinisekise ukuba baya kugqiba ngomtshato.
Kunzima ukucinga ngomntu ongeke alahle okanye angayitshintshi ibhinqa, ukuba ngaba ngeli xesha uhlala engenalo isondo.
Oku kunokubonisa kuphela ukuba unothando kakhulu kwaye ulindele ukulinda nje ngokuba uyathanda.
Esi sibini sithandana. Ukwabelana ngesondo akubalulekanga njengobungane, iimvakalelo, ubudlelwane, iinkcukacha ezincinci kunye neeholide ezincinane. Bona, kungakhathaliseki ukuba kuvakala kangakanani, kuya kwenziwa omnye nomnye.
Enyanisweni, amathuba okuphuka ubudlelwane obuphezulu, ukuba akukho ixesha elininzi lokuthandana, kodwa ukuba amaqabane alinde ixesha eliyimfuneko, kwixesha elizayo baya kuvuzwa kuphela.
Ewe, kwimeko enye kwithuba eli-20 indoda ingalala kwaye emva kweenyanga ezintandathu zeentlanganiso, kwaye ngokukhawuleza uphonsa umfazi.
Oku kufana nabazingeli besilisa, abadaniweyo, "ukufumana eyabo", kodwa kwinkqubo yokufezekisa injongo abayifunayo ukuba bayakwazi ukwenza yonke into.
Ngokubanzi, konke kuxhomekeke kwindlela ozivakalelwa ngayo ngesondo. Ukuba uthanda nje inkqubo kwaye ungaboni kakuhle ngenxa yokuba iqabane lakho lalala ngesondo kwaye laphela, ngoko awuyi kuhlupheka kwaye ukhale.
Ukuba kuwe ngesondo - kakhulu kwindawo ebalulekileyo yobudlelwane babantu, kungcono ukuba ungazami ukuzityhalela kwasekuqaleni kwaye uzame "ukuphatha konke kulula" - awukwazi ukutshintsha.
Nangona, ukuba luthando, ngoko yintoni umehluko, uqale phi?
Ekupheleni kwinqaku, ndingathanda ukwenza amanqaku abalulekileyo. Okokuqala, akukho mntu uthi la manani kufuneka athathwe njengenyaniso yokugqibela.
Kwakhona, oku akusebenzi kubantu abangazange balale ngesondo ngaphambi kokuba (isondo sokuqala ebomini sifanele inqaku elihlukile).
Okwesithathu, eqinisweni, akukona kuphela into eyenziwa ngokwesini echaphazela ubude bobudlelwane.
Kodwa ngelo xesha, akukho mntu uya kukhanyela ukuba kubalulekile. Khawucinge nje malunga noko ukulindele ubuhlobo, ngaphambi kokuba ulale.
Konke okufanayo, nangona egcekeni kunye nekhulu lama-XXI, isondo asifani nokokutya. Ekugqibeleni, nangaphambi kokuba sidle, sihlala sijonge iwashi, sizibuza ukuba kulungele ukudla kwixesha elide (okanye elizayo).
Ukwabelana ngesondo, indlela yokwenza ubuhle kunye nothando okokuqala ngqa
Ungamlahla njani indoda ngesondo ngaphandle kokumcaphukisa?
Demodex: iimpawu, izizathu zokuqala, unyango
Amapheya abhakawa ngeeshizi
UAndrei Malakhov ushiya inkqubo "Baye bathethe!"
Ukusetyenziswa kwe-placebo kwizilingo zeklinikhi
I-Pizza kunye neetamatato kunye ne-sausage
Iimpawu zeMeditera kwiqoqo elitsha uCartier
Iibhonsi kunye neziqhamo
Yintoni kufuneka idle ukuba ibe namandla?
Ziziphi iintlobo ezikulo festile ebusika?
Izidumbu zaseFransi zizaliswe nge-apula